SONATA-CANTATA: May 2008
For the time being, let me say:
I will be away from my desk for3weeks. (May 21, 2008 – June 14, 2008)
I may or may not be back with new experiences.
My life is changing, interesting!
အယမန္တိမာ ဇာတိ, နတ္ထိဒါနိ ပုနဗ္ဘဝေါ”တိ။ [မ-၃-၂၀၇-အစ္ဆရိယအဗ္ဘုတသုတ္တံ]
“ငါသည် လောကတွင် ထိပ်ဆုံးဖြစ်၏။
ကဆုန်လပြည့်နေ့သည် မြင့်မြတ်ခြင်း၏ သင်္ကေတဖြစ်သည်။ လောကတွင် သာမာန်လူနှင့် မြင့်မြတ်သောလူဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ လူသာမာန်တို့သည် လောကသဘာဝအရ ရယူမှုကို အလိုရှိကြသည်။ မိမိတို့၏ စီးပွားချမ်းသာကို အလိုရှိကြသည်။ ချီးမွမ်းမြှောက်ပင့်မှုကို အလိုရှိကြသည်။ အချွေအရံတို့ကို အလိုရှိကြသည်။ သြဇာအာဏာကို အလိုရှိကြသည်။ မြင့်မြတ်သူတို့ကား လူအများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် မိမိတို့၏ စီးပွားချမ်းသာကို စွန့်လွှတ်ကြသည်။ မိမိတို့၏ အသက်ကို စွန့်လွှတ်ကြသည်။ သြဇာအာဏာတို့ကို စွန့်လွှတ်ကြသည်။ လောကအတွက် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံခြင်းသည် မြင့်မြတ်သူတို့၏ လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ဤကဆုန်လပြည့်တွင် လောက၏ အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ အလောင်းလျာကို ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ မယ်တော်မာယာဒေ၀ီသည် အလောင်းတော်၏ သန္ဓေကို လွယ်ပြီးဆယ်လအကြာတွင် မိမိ၏ ဆွေမျိုးများရှိရာ ဒေ၀ဒဟပြည်သို့ အသွားလမ်းခရီး ပင်လုံးကြွတ်ပွင့်နေသော အင်ကြင်းပင်များရှိသော လုမ္ဗနီဥယျာဉ်တွင် ခေတ္တ အနားယူ၏။ ထိုသို့အနားယူခိုက် မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈-ခု ၀ိသာခါနက္ခတ် နှင့် စန်းလယှဉ်သော ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့ နံနက်တွင် အလောင်းတော်ကို ဖွားမြင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်သူတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်တို့သည် အံ့ချီးမခမ်းဖြစ်သကဲ့သို့ပင်၊ သဘာဝတရားက ထိုမြင့်မြတ်သူတို့အပေါ် တုန့်ပြန်မှုသည်လည်း မယုံနိုင်စဖွယ် ဖြစ်ရသည်။ ဖွားမြင်စ အလောင်းတော်သည် ညီညွတ်သော ခြေတို့ဖြင့် မြေ၌ ရပ်တည်ပြီးလျှင် မြောက်အရပ်သို့ ရှေးရှု၍ ခုနှစ်ဖ၀ါးလှမ်းကာ ကြွတော်မူ၏။ ထို့နောက် “ငါသည် လောကတွင် ထိပ်ဆုံးဖြစ်သည်။” စသော ကြုံးဝါးသောစကားကို ဆိုခဲ့၏။ ဗုဒ္ဓ အလောင်းတော်သည် မြင့်မြတ်သူတို့တွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏။
အမျိုးဇာတ်ကြောင့် မြတ်ခြင်း, တန်ခိုးအာဏာကြောင့် မြတ်ခြင်းတို့သည် မြင့်မြတ်ခြင်း အစစ်မှန်မဟုတ်။ လောကအတွက် အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်သော နှလုံးသားကသာ မြင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်သော နှလုံးသားသည် မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြရသော လောကသားတို့အပေါ် သက်သော အေးမြသည့် ကရုဏာတရား အပေါ်အခြေခံသည်။ လောကသားတို့အား ဖုံးလွှမ်းထားသည့် အမိုက်မှောင်ကို ပယ်ရှားနိုင်သော ပညာအလင်းရောင် အပေါ်တွင် အခြေခံရသည်။ မြင့်မြတ်သော နှလုံးသားသည် ကောက်ရိုးမီးကဲ့သို့ ၀ုန်းကနဲတောက်၍ ၀ုန်းကနဲငြိမ်းပျောက်သွားသော သဘောမျိုးမဟုတ်။ မြင့်မြတ်သော နှလုံးသားသည် ပြုစုပျိုးထောင်၍ ယူရသည်။ ထိုသို့ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကို ပါရမီဖြည့်ကျင့်သည် ဟုခေါ်သည်။
ဤကဆုန်လပြည့်သည် မြင့်မြတ်သော နှလုံးသားကို စတင်သန္ဓေတည်ခဲ့သော အခါကာလလည်း ဖြစ်သည်။ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တွင် အလောင်းတော်သည် သုမေဓာရှင်ရသေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား ကြွရောက်လာမည့် လမ်းအား သန့်ရှင်းနေကြသည့်လူတို့ထံမှ “မြတ်စွာဘုရား” ဟူသောစကားသံကို ကြားသောအခါ၊ သုမေဓာရှင်ရသေ့သည် အလွန် နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှု ဖြစ်ရသည်။ မြင့်မြတ်ခြင်းသည် မိမိ၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ တစ်ဆင့် ကူးလူးဆက်ဆံသော သဘောလည်း ရှိရကား၊ သုမေဓာသည် အများနည်းတူ လမ်းသန့်ရှင်းရေးတွင် ကူညီပါဝင်ခဲ့သည်။ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရား ကြွလာသောအခါတွင် အလောင်းတော်သည် မိမိ၏ ဆံပင်တို့ကို ဖြေ၍၊ သင်္ကန်း, စမ္မခဏ် သားရေပိုင်းတို့ကို ဖြန့်ကျက်၍၊ မိမိ၏ ကိုယ်ကို အလျားမှောက်ကာ တံတားခင်း၍ ပေးသည်။ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားကဲ့သို့ပင် ဘုရားအဖြစ်ရောက်ကာ လောကအား ကျေးဇူးပြုလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်ဆုတောင်းလေသည်။ ဤသည်ကို ကြာပန်းရှစ်ခိုင်ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားအား ပူဇော်ရန်လာသော အမျိုးသမီးငယ် သုမိတ္တာသည် မြင်၏။ ဤတွင် ကြာပန်းငါးခိုင်အား သုမေဓာရှင်ရသေ့အတွက်, ကျန်သုံးခိုင်အား မိမိအတွက်ထား၍ ဘုရားရှင်အားလှူဒါန်းကာ သုမေဓာရှင်ရသေ့၏ မြင့်မြတ်သော အမှုတွင် ပါရမီဖြည့်ဖက်အဖြစ် ပါဝင်လေသည်။ “ဤကမ္ဘာမှ လေးအသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းထက်တွင် သုမေဓာရသေ့သည် မြတ်စွာဘုရားဖြစ်လတ္တံ။ ဤသတို့သမီးသည် သင်ရသေ့နှင့် တူမျှသော စိတ်, တူမျှသော ကံ, တူမျှသောအမှုရှိ၍၊ သင့်အား အစဉ်စောင့်ရှောက်လျှက် ပါရမီ ဖြည့်လတ္တံ” ဟု ဒီပင်္ကရာဘုရားက ဗျာဒိတ်စကား မိန့်ကြားခဲ့သည်။ ဤကဆုန်လပြည့်တွင် ဒီပင်္ကရာဘုရား၏ မြင့်မြတ်ခြင်းတို့သည် သုမေဓာ၏ စိတ်နှလုံးကို သိမ်းကြုံးယူကာ၊ ကူးလူး သန္ဓေတည်ခဲ့၏။
ထိုမှစ၍ သိဒ္ဓတ္ထ နှင့် ယသော်ဓရာ အလောင်းလျာမောင်နှံတို့သည် ဖြစ်ရာဘ၀, ရောက်ရာနေရာမှ မြင့်မြတ်သော နှလုံးသားတို့ကို ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်။ မိမိတို့အကျိုးစီးပွားထက် လောက၏ အကျိုးစီးပွားကိုသာ ပဓာနပြု၍၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ, အသွေးအသား, အသက်တို့ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားဘ၀ရောက်သော် ထိုပါရမီတို့သည် အထွတ်ခေါင်သို့ရောက်လေပြီ။ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားသည် လူသားစင်စစ်အဖြစ် မွေးဖွားလာသော်လည်း၊ သာမာန်လူသားမဟုတ်တော့။ မြင့်မြတ်သော မဟာလူသားဖြစ်လေပြီ။ မြင့်မြတ်သူတစ်ကာတို့ထက် မြတ်သော အထွတ်ခေါင်ဖြစ်လေပြီ။
သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားသည် အသက် ၂၉-နှစ်အရွယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာအံ့သော စကြ၀တေးမင်းစည်းစိမ်ကို စွန့်ကာ သတ္တ၀ါတို့ အကျိုးအတွက် ဘုရားအဖြစ်သို့ရရန် အားထုတ်ခဲ့သည်။ အလောင်းတော်ဘ၀ဖြင့် လောကသားတို့ကို လောကဆင်းရဲမှ လွတ်ရန် မရေတွက်နိုင်သောကမ္ဘာများစွာ အားထုတ်ခဲ့ဖူးပြီ။ ယခုနောက်ဆုံးဘ၀ ရောက်သောအခါ၌ကား သတ္တ၀ါတို့အား သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ ကယ်မ, ထုတ်ဆောင်ရန် အားထုတ်လေပြီ။ လောကဆင်းရဲနှင့် သံသရာဆင်းရဲနှိုင်းစာလျှင်၊ လောကဆင်းရဲသည် ပြောပလောက်သော ဆင်းရဲမဟုတ်တော့။ သံသရာမှ မလွတ်သရွေ့ ဆင်းရဲအမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ရမည်သာ။ ဆင်းရဲဟူသမျှ၏ အရင်းမြစ်ကို ချိုးဖြတ်ရန်အတွက် တစ်ပြောင်းတစ်ပြန်ပြန် ပြေးသွားကျင်လည်နေရသော သံသရာကို ဖြတ်တောက် ရပေမည်။ လောကအကျိုးကို ဆောင်ရန် ဦးစွာပထမ မိမိကိုယ်တိုင် သံသရာဆင်းရဲအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် ကျိုးပမ်းရသည်။ ထို့ကြောင့် သံသရာမှ ထွက်မြောက်ကြောင်းတရားကို ရှာဖွေခြင်းဟူသော မြတ်သောရှာဖွေခြင်း (အရိယာပရိယေသန) ကို အားထုတ်တော်မူခဲ့၏။
ဤကဆုန်လပြည့်သည် လောက၏ အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်တော်မူသောနေ့ ဖြစ်သည်။ ‘ဗုဒ္ဓ’ ဟူသည် နိုးကြားသိမြင်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဒုက္ခခပ်သိမ်း၏ အရင်းမြစ်ကို ရှာဖွေသိမြင်ခြင်းကြောင့် ဗုဒ္ဓ ဟူ၍ အမည်ရသည်။ အလောင်းတော်သည် ဂယာအရပ်မှ ဥရုဝေဠတော သေနနိဂုံး ဗောဓိပင်ရင်းတွင် “ဘုရားမဖြစ်သရွေ့, ဤနေရာမှ မထတော့”ဟူသော ခိုင်မြဲသောစိတ်ဖြင့် အားထုတ်တော်မူရာ၊ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခု ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အကုန် အာရုဏ်တက်အချိန် ၀ိသာခါနက္ခတ်နှင့် စန်းလတို့ ယှဉ်ခိုက်တွင် ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူခဲ့သည်။
“အနေကဇာတိသံသာရံ၊ သန္ဓာဝိဿံ အနိဗ္ဗိသံ။
ဂဟကာရံ ဂဝေသန္တော၊ ဒုက္ခာ ဇာတိ ပုနပ္ပုနံ။”
“ဂဟကာရက ဒိဋ္ဌောသိ၊ ပုန ဂေဟံ နကာဟသိ။
သဗ္ဗာ တေဖာသုကာ ဘဂ္ဂါ၊ ဂဟကူဋံ ၀ိသင်္ခတံ။
၀ိသင်္ခါရဂတံ စိတ္တံ၊ တဏှာနံ ခယမဇ္ဈဂါ”တိ။ [ဓမ္မပဒ-ဇရာဝဂ်-ဂါထာ-၁၅၃, ၁၅၄]
ဆင်းရဲဒုက္ခကို အဖန်ဖန်ဖြစ်စေတတ်သော လက်သည် (အိမ်ဆောက်လက်သမား)အား ရှာဖွေခဲ့ပါသော်လည်း၊ မတွေ့သဖြင့် ဘ၀များစွာသံသရာကို ကျင်လည်ခဲ့ရလေပြီ။
အို... အိမ်ဆောက်လက်သမား၊ ငါသည် သင့်အား ယခု မြင်ပြီ။
သင်သည် နောက်တစ်ဖန် ဆောက်လုပ်နိုင်တော့မည် မဟုတ်တော့။
သင်၏ ကိလေသာဟူသော အခြင်ရနယ်တို့ကို ချိုးဖျက်ခဲ့ပြီ။
အ၀ိဇ္ဇာတည်းဟူသော အိမ်အထွတ်ကို ဖျက်ဆီးအပ်ပြီ။
ငါ၏ စိတ်သည် ပြုပြင်စီရင်ခြင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ပြီ။
တဏှာကုန်ကြောင်း အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရပြီ။
ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်သည်နှင့် ဤ “အနေကဇာတိ” အစချီသော ၀မ်းမြောက်သော ဥဒါန်းစကားကိုဆို၏။ ဆင်းရဲအပေါင်းတို့၏ လက်သည်ရင်းမြစ်သည် မသိမှု ‘အ၀ိဇ္ဇာ’ နှင့် တပ်မက်မှု ‘တဏှာ’ ဖြစ်ကြောင်းသိလေပြီ။ ၄၅-၀ါကာလပတ်လုံး မနားတမ်း မိမိသိသော အသိတရားကို မျှဝေ၍ ဟောကြားခဲ့သည်။ အလောင်းတော်ဘ၀တွင် စည်းစိမ်, အာဏာ, ကိုယ်လက်အင်္ဂါ, အသက်တို့ကို စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်၍ လောကသားတို့အား ကယ်တင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ဗုဒ္ဓအဖြစ်တွင် သစ္စာလေးပါးတရားကို ဟောကြား၍ သတ္တ၀ါတို့ကို သံသရာမှကယ်တင်ခဲ့သည်။
ဟန္ဒဒါနိ, ဘိက္ခဝေ, အာမန္တယာမိ, ၀ယဓမ္မာ သင်္ခါရာ, အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ။ [ဒီ-၂-၁၈၅-မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ္တံ]
ရဟန်းတို့... အကျဉ်းလိုရင်းကို ဆိုအံ့။ အလုံးစုံသော သင်္ခါရာတရားတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိကုန်၏။ မမေ့မလျော့သောသတိတရား ရှိကြကုန်လော့။
အင်ကြင်းပင်တို့ အကြားတွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သော ဗုဒ္ဓသည် အင်ကြင်းပန်းတို့ပွင့်သော ဤကဆုန်လပြည့်နေ့ (မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈-ခု ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့ အရုဏ်တက်ခါနီး အချိန်တွင်) မလ္လာမင်းတို့၏ ဥယျာဉ်အတွင်းရှိ အင်ကြင်းပင်ရင်း၌ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူခဲ့သည်။ သာမာန်လူသားတို့အမြင်တွင် ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်သော်လည်း၊ အရိယာသူတော်စင်တို့ အမြင်၌ကား ဒုက္ခခပ်သိမ်းငြိမ်း၍ လုံးဝအေးငြိမ်းမှုကိုပြုသွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကား မြင့်မြတ်သူတို့၏ ထိပ်ဆုံးမြင့်မြတ်မှုပင် ဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်သော နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓသည် ဤကဆုန်လပြည့်တွင် “အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ” ဟူသော နောက်ဆုံးသြ၀ါဒ စကားဖြင့် လောကသားတို့အား ကျေးဇူးပြုသွားခဲ့လေသည်။
Wonder Woman ... My Mum
ဤ အ၀ိရောဓေန၊ တရားကို မကျင့်ဆောင်၊ ပြည်သူတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလျှင် ပြည်သူတို့မုန်း၍ အလိုရှိရာ သခင်ရှာပြီးလျှင် မင်းကို ဖျက်ဆီးသည်။ မင်းအားကြီး၍ ပြည်သူတို့က မဖျက်ဆီးနိုင်လျှင်လည်း အခြားနိုင်ငံသို့ သွား၍ ပြည်ပျက်သည်။ ဤကဲ့သို့ ပြည်သူနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ ပျက်စီးသည်ကား မရေတွက်နိုင်။ ငါးရာငါးဆယ်ဇာတ်၊ ရာဇ၀င်တို့၌ အများပင် ဖြစ်လေသည်။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရသည်လည်း များလှလေပြီ။
[ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း - ယောမင်းကြီးဦးဘိုးလှိုင်]
ဘုရားအလောင်းတော် ဝေဿန္တရာမင်းသည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရည်သန်၍ ဒါနပါရမီကို ဖြည့်တင်းတော်မူခဲ့ရာ၊ ၀တ္ထုပစ္စည်းတို့ကို မဆိုထားလင့် မိမိနှလုံးသားကိုပင် အလှူခံယူသူရှိက လှူအံ့ဟု ငယ်စဉ်ကပင် အဓိဋ္ဌာန်ထားခဲ့သည်။ သို့အားလျော်စွာ အခါတစ်ပါးတွင် မိုးခေါင်ရေရှား၍ ဒုဗ္ဘိကန္တရကပ်ဆိုက်ရောက်နေသော ကလိင်္ဂတိုင်းအား များစွာသော ကရုဏာသက်၍ ပစ္စယဆင်ဖြူတော်အား လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဤသည်ကို မိမိ၏ စေတုတ္တရာတိုင်းသာပြည်သူတို့က သဘောမကျ။ အမျက်ပြင်းစွာထွက်ကြ၍၊ ဝေဿန္တရာမင်းအား တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်ပါရန် ခမည်းတော် သိဉ္စည်းမင်းအား တောင်းဆိုကြ၏။ သက်ဦးဆံပိုင်မင်းဖြစ်သော သိဉ္စည်းမင်းက ဝေဿန္တရာသည်လည်း မိမိ၏သားဖြစ်၏။ စေတုတ္တရာတိုင်းသားတို့လည်း မိမိ၏သားသမီးများဖြစ်၏။ သားသမီးများ အချင်းများရာတွင် တစ်ယောက်နှင့် အများဖြစ်ပါက အများကိုအနိုင်ပေးရမည်။ ထို့ကြောင့် မင်းကြီးသည် သားတော် ဝေဿန္တရာအား ချစ်လျက်နှင့် နိုင်ငံမှထွက်ခွာရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
ပစ္စယဆင်ဖြူတော်သည် ဝေဿန္တရာမင်း၏ ဘုန်းကံကြောင့် ပေါ်သော ဆင်ဖြူတော်ဖြစ်သည်။ အလှူသည် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးဘေးဆိုက်နေသည့် လူအပေါင်းအား ကယ်တင်လိုသော စေတနာဖြစ်သည်။ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကို ရည်စူး၍ပြုသော မြတ်သောအမှုဖြစ်သည်။ မိမိ၏အမှုအပေါ်တွင် စိုးစိမျှ အပြစ်မြင်ဖွယ် မရှိသော်လည်း၊ ပြည်သူ၏ ဆန္ဒကိုလေးစားသောအားဖြင့် မင်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်၍ ပြည်နှင်ဒဏ်ကို ကြည်ဖြူစွာ ခံယူခဲ့သည်။
မဟာသုတသောမဇာတ်တွင် ဘုရားအလောင်းတော် သုတသောမမင်း၏ ပညာသင်ဘက် ဗြဟ္မဒတ်မင်းသည် သားစားကြူးသူဖြစ်သည်။ စားတော်ဆက်သည် ‘ရသက’ ဖြစ်သည်။ ရသကသည် ပွဲတော်ဆက်တိုင်း အသားဟင်းကို ထည့်၍ ဆက်ရသည်။ အသားမရသော တစ်နေ့တွင် လူသားကိုချက်၍ ဆက်မိသည်မှစ၍ နောက်ဆုံးတွင် လူသားကို မစားရမနေနိုင်အောင် တပ်မက်သွားသော မင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ပေါရိသာရ (လူသားစားသူ) ဟု အမည်ရသည်။ ရသကနှင့် ပေါင်းကာ ကောက်ကျစ်သောနည်းလမ်းများဖြင့် လူသားရအောင် ဖန်တီးကာ လူသားကို ပွဲတော်တည်သော မင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းစုံကို ပြည်သူတို့သိသောအခါ တိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်။ လူကြမ်းပေါရိသာရမင်းသည် ပြည်သူ၏ ဆန္ဒကို မပယ်ရှားပဲ၊ မင်းအာဏာကို စွန့်ကာ ရသကကိုသာ ခေါ်၍ တိုင်းပြည်မှ ထွက်ခဲ့သည်။ “မရ, ရသက ချိုင်” ဟုဆိုစမှတ်ပြုရလောက်အောင် စားစရာလူသားရှားလာသောအခါ မိမိ၏ စားတော်ဆက်အဖော် ရသကကိုပင် သတ်၍ စားသော မင်းဖြစ်သည်။
နောင်တွင် မိမိဖမ်းမိထားသော သုတသောမမင်းနှင့် ‘သတာရဟ’ ဂါထာလေးဂါထာအား ဟောကြားပါက လိုရာဆုလေးဆုပြန်ပေးမည်ဟု ပေါရိသာရက ကတိစကားပြုသည်။ သုတသောမမင်းက ‘သတာရဟ’ ဂါထာလေးဂါထာ အား ဟောကြားကာ တောင်းဆု လေးဆု တောင်းသည်။ နောက်ဆုံး တောင်းဆုဖြစ်သော ‘လူသားမစားရန်’ အချက်ကို ပေါရိသာရက အလွယ်တကူ လက်မခံလို။ ထိုအခါ သုတသောမမင်းက “ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စည်းစိမ်ဥစ္စာယှဉ်လာလျှင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် စည်းစိမ်ဥစ္စာကို စွန့်ရသည်။ အသက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ယှဉ်လာလျှင် အသက်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို စွန့်ရသည်။ အသက်နှင့် ကတိသစ္စာယှဉ်လာလျှင် ကတိသစ္စာအတွက် အသက်ကိုပင်စွန့်ရ၏” ဟုဟောရာ ပေါရိသာရက မိမိပေးထားသော ကတိကို မပယ်ဖျက်ပဲ မင်းအာဏာနှင့်ပင် လဲခဲ့သော လူသားစားခြင်းကို စွန့်ကာ ငါးပါးသီလမြဲသွား ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ပေါရိသာရသည် ဂေါတမဘုရားလက်ထက်တော်၌် အင်္ဂုလိမာလမထေရ် အဖြစ် ကျွတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့လေသည်။
နှလုံးသားနုသော ဝေဿန္တရာမင်းသည် မိမိကမှန်သည့်တိုင် ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လေးစားသဖြင့် မင်းစည်းစိမ်ကို ကြည်ဖြူစွာ စွန့်ခဲ့ဖူးသည်။ လူသားစားသော လူ့ဘီလူး လူကြမ်းကြီးပေါရိသာရသည်လည်း ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်ပဲ မင်းအာဏာကို စွန့်ခဲ့သော ထုံးရှိ၏။ ပြည်သူကို ဆန့်ကျင်သော မင်းတို့သည် ပျက်စီးရသည်။ မင်းတို့အားကြီး၍ ပြည်သူက မတော်လှန်နိုင်လျှင်လည်း၊ အသိပညာရှိသော ရဟန်းရှင်လူတို့ ပြည်ရွာကို စွန့်ခွာကာ တစ်ပါးသောတိုင်းပြည်သို့ ခိုလှုံကြ၍ တိုင်းပြည် ပျက်တတ်ကြောင်း ယောမင်းကြီးဦးဘိုးလှိုင်က သတိပေးခဲ့ဖူးသည်။
[မောင်ထင်၏ “ယောမင်းကြီးဦးဘိုးလှိုင်– အထ္ထုပ္ပတ္တိ နှင့် ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း”၊ ဦးရွှေအောင်၏ “ဗုဒ္ဓ– လောကသားတို၏ အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင်– ကိုယ်တွေ့ဗုဒ္ဓ၀င်” တို့မှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။]
လိုနေတာက၊ မေတ္တာ ပညာ
အောင်မလေးးးးးးးးးး၊ အဆုံး နောင်မတ,ခင်။